XOG XASAASI AH:Wafdi IGAD oo Itoobiya Ka Yimi oo Tukaraq Ku Wajahan & Maamulka S/land oo Si Dagaalka Sool Iska Joojiyan IGAD Dhex ka Dal batay (AKHRISO WARBIXIN FALAN QEYNTA
June 13, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 8
Tukaraq(Marqaannews.net)_Sida la saadaalinyo, waxaa Somalia ku soo wejehan Saacadaha Soo socda wafdi ka socda Urur Goboleedka IGAD oo Ethiopia laga soo diray. Wararku waxay sheega-yaan inuu u socdo sidii Colaadda ka aloosan Tukeraq xal loogu helo ,Qorshaas oo salka ku hayaa in la dhexdhe-xaadiyo Puntland iyo Somaliland. Qorshaha iyo talada uu Ururka IGAD wado waxay tahay, in ciidamada labada dhinac ay ku noqdaan meelihii ay kala degnaa-yeen ka hor intaan dagaalka Tuke-raq dhici,
ujeedaduna tahahay in Ciidamada S/Land dib ugu noqdaan halki ay markii hore ka soo duuleen . Ajendaha iyo qorashaha IGAD wuxuu khatar ku yahay oo meesha ka saaraaya, oo hakinaya abaabulka xooggan ee loogu tala galay xoraynta magaala madaxda Beesha SSC L/ Caanood iyo deegaanda kale ee Beesha ka maqan.
Waa qorshe iyo ajende laga soo maleegay Addis-Ababa oo aad khatar u ah haddii aan laga hortigin. Sida la sheegayo waxay ku soo hormarayaan Caasimadda dalk Muqdisho, si ay madaxda Faderalka u Qanciyaan inay kala qaybgasho qorshaha ay wataan, ka dibina uga sii gudbaan Garoowe iyo Hargeysa .
Warar aan la beeneysan karin waxay sheega-yaan in codsiga dhexdhe-xaadinta ay ka timi dhinaca Maamul Beeleedka Hargeysa markay dareemeen inay bad galeen, oo ciidan xoog leh la soo dul dhigay, dhabna ay ka tahay inuu dib ula soo noqdo dhammaan dhulkii taliska Somali diidku xooga ku qaybsaday October 2007.
Doorkan ama markan waxay u muuqataa in Maamulka Puntland Xorreynta L/Caanood iyo dhulka intiisa kale ay daacad ka yahay. Sidaa darteed waxaa qof kasta oo Beesta SSC ku abtirsada, oday dhaqameed, rag iyo dumar, dhallinyaro lab iyo dhedig, waxay waajib ku tahay inay isgarab taagaan Puntland, oo u badheedhay una guntaty xoraynta L/Caanood iyo dhulka cadawgu haysto.
Beeshu waa inay kaalin muuqata ka gudato, muruq iyo maalba. Waayo, qorshaha Ururka IGAD soo wado jiritaanka Beesha SSC ayuu khatarta ku yahay. Beesha waxaan uga digaya haddii aanay dareen-keeda iyo diimadeeda ka muujin mawjadan khatarta ah ee ku soo socota,, oo codkeedu meesha ka muuqan, waxaa run noqonaysa beenta iyo dooda Maamulka Hargaysa meel kasta la taagan-yahay oo ah in Beeshu rabto oo ku qanascan-tahay inay Somaliland ka mid noqdaan, oo aanay beeshu rabin Puntland inay ka mid noqdaan.
Haddii Ergada IGAD dhadha-qaaq bulsho ka soo horjeeda S/Land Beeshu muujin, waxay u badantahay IGAD inay u qaadato warkan beenta ah ee S/Land inuu run yahay oo ku qanacdo. Somaalidu waxay ku maah-maadaa, gabadha aamuska ayaa lagu meheriya.
والمثل العربي يقول السكوت علامة الرضى والمثل العربي يقول السكوت علامة الرضى
Maskaxdayda kooban markaan la kaashaday, waxaan Beelu weynt SSC u soo jeedinaya, kuna talinayaa maalinta wafdiga IGAD soo gaadho Xamar in lagu dhaqaaqo arrimaha soo socda:
Lasoco Qeybta Labaad iyo waxaa uga Furan Shacabka SSC Khatarta IGAD ee hargeysa laga Soo Abaabuley.
Qore “Nornayl cali Flosy
Budh budh leyn waxa looga baahanyahay inay boodh isku qariskan iska daayaan oo ay haday wax isla hayaan ay banaanka is keenaan. Maxaa u diidan inay weerar soo qaadaan? Tollaay yaa Daaroodaay ma waxbay u tari weyday? Mise waxay saluugeen kub ku boodhleyaasha lasoo ururiyey tayadooda ciidaneed? Maxaa hubkii Armaajo ku deeqay ku dhacay? Mise Dhulbahente dhulkiisa isagu ha xoreysto miyaa sheekadu oo Daaroodkii kale godbuu ku dhacay? Kkkkkkklkll
Mise waa dhexdhexaad imika diyaar uma nihin oo kaartadaan wakhtiga ku korshisan laheyn nooma baandheysna welli? Aniga sidey ila tahey waa tan danbe oo nimankani waxay rabaan. Inay bakhbakhdan wakhtiga ku dheereystaan sidii ay ugu suurtowdo inay wakhtiga korodsadaan. Waayo maanta hadii xaajada la qaboojo reer Puntleyn way ka diidi doonaan in hal maalin ay nimankan ugu daraan wakhtigooda.
beesha ssc waxaan ka codsanaya waa inay saqiir iyo kabiirba ka kacaan igad iyo waxay ka wadoo wa inay shacuurdooda muujiyan inaysan rabin somali diidka dadka diga sool sanag cayn waax garadka waa inay meel cad iska taagan IGAD na u sheegan rugta oo dhahan somaliland ha nooga baxdo mana doonayno wa bilahi toowfiig
IGAD filimka aya wadato kama shaqaynayo dhinaca Puntland,Sababtu waxay tahay manta Harti waxay isku wada Raaceen in Isaaqa markan laga wada xoreeyo deegaanadda Tukaraq iyo Laascaanood.Taasu waxay keenaysaa in Maamul Beeleedka iidoorku ay ku ekaadaan Hargeisa,Burco iyo Berbera. Dhulbahante wuu wada tashaday wuuna ogaaday in Isaaqu dano gaar ah wateen ee aysan jirin dan ay u hayaan Qabaaiilka kale ee degan waqooyiga.
Taariikhdu waxay qori doontaa WAAGII AY ISAAQU LAAB LA KAC IYO RIYO BEEN AH ay la soo keceen ee ka shaqayn weyday somaliya.
sheekada waanu ka go’aynaa somaliya waxy ku fiicnayd 50 sano ka hor marki isticmaarku joogay waqooyiga maantase waa sheeko aay caqliga geli Karin oo aan cidna laga aqbalayn.Isaaquna wey ogyihiin in Qabiil uusan Noqon Karin Qabiil.
igad weligoodba snm bay wadwadeen waa in baxa layiraahdaa waxay sheegayaan baaba iska yar xabashiday futada u foorarisay snm tu laakiin sheekadii way is bedeshey
Awood laanta darood oo meshi usareysay marysa isaq oo la siman majerteniya ayaa sida uga cabajiyey walee darood wa lo yaaba adunka halku cago dhigo isaga bilaby tolayde kismayo iyo muqdisho bal wa hadu ka taliyo dhulki dir wa inuu dabada kaga so abxaa
Karim asad says:
I love the seem and the come to feel with the frontal lace wigs https://youtu.be/3KO3e4I3_24. It is wonderful equally for vogue deliver and awesome.